U-Iggy Pop ubeka ngokwendalo kwiklasi ekhethekileyo yokuzoba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imicu ka-Iggy Pop ihamba ze kwiklasi yokuzoba ubomi
Isifundo malunga nokwakheka komntu kubalulekile kubazobi kunye neekhathuni kuqeqesho lwabo nakulo lonke ubugcisa babo. Olu phononongo lugqityiwe ngokudlula kwisitudiyo sobugcisa apho sinokwenza khona umzobo wendalo weemodeli abazimiselayo iiseshoni zeyure okanye ezimbini ukuba benze iiseshoni ezikhawulezayo zemizuzu emi-3 apho, eyona nto kufunwa eyona nto iphambili.
Iggy Pop ngu igcisa elingenanto iqhelekileyo ukuba usonwabisile ngomculo wakhe kwiminyaka emininzi eyenye kwaye ungomnye weemvumi ezithanda ukuthethelela, ngelixa bezama izinto ezintsha kolu phando lweendlela ezintsha zokubonisa. Kakhulu kangangokuba umzimba weli bali lamatye usetyenziselwe iklasi yobugcisa apho amagcisa angama-21 amenza ze ehamba nokuzoba imizobo yendalo.
Ukuziva ubukele kangangeyure okanye ezimbini liqela labafundi okanye ngabapeyinti gxila kwiinkcukacha zeposi okanye umgca wento yinto evuyisa kakhulu. Into awayefuna ukuyifumana u-Iggy Pop ngokwakhe kwesi sicelo esivela kwiMyuziyam yaseBrooklyn kwaye wakhawulwa ngumculi uJeremy Deller.
Imizobo eyenziwe ngexesha leklasi iya kuba yinxalenye ye umboniso osondeleyo ngokuwa ngo-2016. Isindululo esothusayo sokumangaliswa kwamagcisa angama-21 aqokelelene ngolo suku kwiklasi ekhethekileyo apho u-Iggy Pop enze khona ehamba ze ukuze abe ngumthombo wokhuthazo kuzo zonke iintlobo zabafundi, amagcisa kunye nabo badla umhlala-phantsi.
Udidi olukhulelwe yi Umzobi waseBritane uJeremy Deller kwaye ikhokelwe ngumculi, ikhathuni kunye notitshala uMichael Grimaldi. Unesindululo esipheleleyo esivela I-Instagram ngokwayo weMyuziyam yaseBrooklyn ukuze uqaphele umboniso wokuwa kulo nyaka, ukuba wawuyintoni, wawukufuphi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imicu ka-Iggy Pop ihamba ze kwiklasi yokuzoba ubomi
Iiplagi zasimahla zicetyiswa kakhulu kuyilo
Ukujonga okukrakra kukaJolanta Talaikiene